ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार शुक्र ग्रह शनिबारबाट कर्कट राशीमा गोचर गर्ने हुँदा यी राशीलाई हुनेछ यस्ता हानी र फाइदा रहेका छन्Samachar Pati
ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार शुक्र ग्रह शनिबारबाट कर्कट राशीमा गोचर गर्ने हुँदा यी राशीलाई हुनेछ यस्ता हानी र फाइदा रहेका छन्
यही जेठ २६ गते शनिबारबाट शुक्र ग्रह कर्कट राशीमा गोचर हुँदैछ । ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार शुक्र ग्रह कर्कट राशीमा गोचर हुँदा केही राशीलाई हानी र केही राशीलाई फाइदा पुग्छ ।
शुक्र ग्रहलाई भौतिक सुविधाहरुको दाता भन्ने गरिन्छ भने यस राशी परिवर्तनले भौतिक शुखमा धेरै असर गर्ने ज्योतिषीहरु बताउँछन् ।
यसले प्रेम र पारिवारिक सम्बन्धमा पनि असर गर्छ । विशेषगरी यस राशी परिवर्तनले सबै भन्दा असर मिथुन र कर्कट राशीलाई गर्ने भएपनि अन्य केही राशीलाई असर र फाइदा पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।
कुन कुन राशीलाई कस्तो हानी र फाइदा ?
शुक्रको राशी गोचरसँगै यस राशीको चौथो भावमा शुक्र रहने हुँदा पारिवारिक जीवनमा सिधा असर पर्ने देखिन्छ । परिवारको लागि खर्च बढेर जाने देखिन्छ भने निजी र व्यवसायिक जीवनमा सन्तुलन राख्न सके मात्रै लाभ मिल्न सक्ला। साझेदारीले राम्रै लाभ दिलाउन सक्ला। साथै कुनै ठुलै योजना हात लाग्न सक्ला।
शुक्र राशी गोचरसँगै यस राशीको तेस्रो भावमा शुक्र रहने हुँदा प्रेम जीवनमा असर पर्ने देखिन्छ । यस राशी भएकाको प्रेम सम्बन्धले नयाँ रुप लिन सक्ला भने मित्रजनसँगको सामिप्यता समेत बढेर जाने देखिन्छ । प्रेम विवाहमा समेत परिणत हुने अवस्था आउन सक्ला । आर्थिक अवस्था सुधार होला ।
मिथुन राशी भएकाहरुको पारिवारिक जीवनमा धेरै उत्तारचढाव हटेर जाने देखिन्छ, जसले गर्दा पारिवारिक सुख हुने देखिन्छ । अचल सम्पत्तिबाट लाभको सम्भावना पनि छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउने देखिन्छ।
शुक्र ग्रह कर्कट राशीमा गोचर हुने भएका कारण धेरै लाभ मिल्ने देखिन्छ। सम्पूर्ण तवरबाट शुक्र ग्रहले सहयोगनै पुर्याउने देखिन्छ। यस परिवर्तनले भौतिक सुखमा वृद्धि गराउने देखिन्छ भने जागिरमा पनि पदोन्नतिको योग बन्ने देखिन्छ।
शुक्र राशि यस परिवर्तन सँगै १२ औं भावमा रहने छ। यस कारण सिंह राशी भएकाहरुको आर्थिक अवस्था त्यत्ति राम्रो नहुने देखिन्छ। बन्न लागेको कार्य पनि बिग्रन सक्ला। धेरै खर्च समेत हुने देखिन्छ। बिनाकारण यात्रामा खर्च बढ्न सक्ला। आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह पनि गर्नु होला। आर्थिक घाटाका कारण तनाव बढ्न सक्ला।
शुक्र राशी यस परिवर्तन सँगै ११ औं भावमा रहने छ। यस कारण सामाजिक सम्बन्ध सुध्रने देखिन्छ। साथै सामाजिक मान सम्मान पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक रुपमा पनि तपाईको लाभदायक समय आउने देखिन्छ। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यम केहि मात्र प्रयत्न गर्नु भएमा पनि तपाईलाई सफलता मिल्न सक्ला। भाग्यले साथ दिन सक्ला।
शुक्र राशि यस परिवर्तन सँगै १० औं भावमा रहने छ। यस कारण षडयन्त्रको सिकार हुनु पर्ने देखिन्छ। हरेक कार्य बिगार्न शत्रु सफल हुने देखिन्छ। कतैबाट पनि सहयोग नहुँदा निराशा छाउन सक्ला।
शुक्र राशि यस परिवर्तन सँगै ९ औं भावमा रहने छ। यस कारण जीवनमा मिश्रित असर मिल्ने देखिन्छ। लाभ साथै नोक्सान बारबार रुपमा मिल्न सक्ला। सामाजिक रुपमा सम्बन्ध सुध्रने भएपनि पारिवारिक रुपमा भने सम्बन्ध बिग्रन सक्ला। तर आर्थिक मामला भने तपाई धेरैनै संयम रहनु पर्ने देखिन्छ।
शुक्र राशि यस परिवर्तन सँगै ८ औं भावमा रहने छ। यस कारण स्वास्थ्यमा धेरै असर देखा पर्ने देखिन्छ। विशेषतः तपाइलाई यौन समस्याले सताउने देखिन्छ। साथै चोट समेत लाग्ने सम्भावना भएका कारण सवारी देखि सावधान रहनु होला। कसैसँग पनि सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नको लागि बोलीमा नियन्त्रण राख्नु होला।
शुक्र राशि यस परिवर्तन सँगै ७ औं भावमा रहने छ। यस कारण हरेक क्षेत्र सफल हुने देखिन्छ। परिवारमा प्रेम बढेर जान सक्ला भने व्यवसायमा समेत परिवारबाट भने जस्ती सहयोग मिल्न सक्ला। जागिरको शिलशिलामा यात्रा समेत हुन सक्ला। आर्थिक मामलामा नभई कानुनी रुपमा पनि सफलता मिल्न सक्ला।
शुक्र राशी परिवर्तन सँगै सानो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि पनि धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने देखिन्छ । बिना कारण मानहानी समेत हुने देखिन्छ। बोली र व्यवहारका कारण लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ला। खर्चमा वृद्धि हुन सक्ला भने प्रेम सम्बन्धमा केहि गारो अवस्था सृजना होला ।
केहि नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्ने देखिन्छ भने नयाँ सम्बन्ध पनि स्थापित हुन सक्ला। राजनीतिक रुपमा समेत समय राम्रै रहन सक्ला। प्रेम सम्बन्धले यस समयमा धेरै असर देखाउने समय रहेको छ।
जान्नुहोस् ! सर्पले टोक्दा के गर्ने हुन्छ के गर्न हुदैन